မင်္ဂလာဖြိုးလို့ တိုးတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ် တစ်သုံးခွန်ကိုး – Happy Burman New Year 1379 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » မင်္ဂလာဖြိုးလို့ တိုးတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ် တစ်သုံးခွန်ကိုး – Happy Burman New Year 1379
မင်္ဂလာဖြိုးလို့ တိုးတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ် တစ်သုံးခွန်ကိုး – Happy Burman New Year 1379
Posted by kai on Apr 17, 2017 in Cultures, Editor's Choice, Myanmar Gazette |9comments
သပြေ။ တမာ။ ကံ့ကော်။ အုန်း။ ရွက်လှ။ နှင်းဆီ။ ကြယ်ပန်း။ ဇီးညွှန့်။
မင်္ဂလသုတ် (ပါဠိနှင့် မြန်မာပြန်)
၁။ယံ မင်္ဂလံ ဒွါဒသဟိ၊
စိန္တယိံ သု သဒေ၀ကာ၊
အဋ္ဌတိံသဉ္စ မင်္ဂလံ။
မင်္ဂလံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
၃။ ဧ၀ံ မေ သုတံ၊ ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာဝတ္ထိယံ ၀ိဟရတိ
ဇေတ၀နေ အနာထပိဏ္ဍိကဿ အာရာမေ။
အထ ခေါ အညတရာ ဒေ၀တော
အဘိက္ကန္တာယ ရတ္တိယာ အဘိက္က န္တ၀ဏ္ဏာ
ကေ၀လကပ္ပံ ဇေတ၀နံ သြဘာသေတွာ
ယေန ဘဂ၀ါ၊ တေနုပသင်္ကမိ ဥပသင်္ကမိတွာ။
ဘဂ၀န္တံ အဘိဝါဒေတွာ ဧကမန္တံ အဋ္ဌာသိ။
ဧကမန္တံ ဋ္ဌိတာ ခေါ သာ ဒေ၀တာ
ဘဂ၀န္တံ ဂါထာယ အဇ္ဈဘာသိ။
၄။ဗဟူ ဒေ၀ါ မနုဿာ စ၊
မင်္ဂလာနိ အစိန္တ ယုံ။
ဗြူဟိ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
၅။ အသေ၀နာ စ ဗာလာနံ၊
ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ၊
၆။ ပတိရူပ ဒေသ၀ါသော စ၊
ပုဗ္ဗေ စ ကတ ပုညတာ။
အတ္တသမ္မာ ပဏီဓိ စ၊
၇။ ဗာဟုသစ္စဉ္စ သိပ္ပဉ္စ၊
၈။ မာတာပိတု ဥပဋ္ဌာနံ၊
အနာကုလာ စ ကမ္မန္တာ၊
၉။ ဒါနဉ္စ ဓမ္မစရိယာ စ၊
၁၀။ အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊
မဇ္ဇပါနာ စ သံယမော။
အပ္ပမာဒေါ စ ဓမ္မေသု၊
၁၁။ ဂါရဝေါ စ နိဝါတော စ၊
၁၃။ တပေါ စဗြဟ္မစရိယဉ္စ
နိဗ္ဗာန သစ္ဆိကိရိယာ စ၊
၁၄။ ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊
စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ၊
၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတွာန၊
သဗ္ဗတ္ထ သောတ္ထိံ ဂစ္ဆန္တိ၊
တံ တေသံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ။
၁။ ကြီးပွားချမ်းသာရေးကို အလိုရှိကြသော နတ် လူတို့သည် ၁၂ နှစ်ကြာအောင် မင်္ဂလာတရား အစစ်အမှန်ကို ရှာဖွေခဲ့ကြသော်လည်း ၃၈ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်အစစ်အမှန်ကို မရရှိခဲ့ကြပါ။
၂။ မြတ်စွာဘု၇ားသည် မကောင်းမှုအားလုံးကို ပယ်ဖျောက်နိုင်သော ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာတရားတော်ကို သတ္တ၀ါအားလုံးတို့ချမ်းသာရေးအတွက် ဟောတော်မူအပ်ပါပြီ။ ထိုဘုရားဟော ၃၈ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရွတ်ဆိုကြပါစို့။
၃။ အရှင်မဟာကဿပဘု၇ား-တပည့်တော်အာနန္ဒသည် မြတ်စွာဘုရားထံမှ ဤသို့ကြားနာမှတ်သားလိုက်ရပါသည်။ အနာထပိဏ်သူဌေး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသော ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်မှာ မြတ်စွာဘုရားသီတင်းသုံးတော်မူခိုက် တစ်ခုသောညဉ့်၏ သန်းခေါင်ယံအခါတွင် အမျိုးအမည်မထင်ရှားသော နတ်သားတစ်ပါးသည် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကို အလင်းရောင်ပေးလျက် ဘုရားမြတ်စွာအားလာရောက်ဖူးမြော်ပြီး ဂါထာတစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ဆိုကာ ဘု၇ားရှင်အား လျှောက်ထားပါသည်။
၄။ မြတ်စွာဘု၇ား- စီးပွားချမ်းသာကို အလိုရှိကြသော နတ် လူအပေါင်းတို့သည် ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်ကို ရှာဖွေခဲ့ကြသော်လည်း မ၇ရှိကြသေးပါ။ ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်ကို မြတ်စွာဘုရား ဟောပြတော်မူပါဘုရား။
လူမိုက်များကို မမှီဝဲ မဆည်းကပ်ခြင်း
ပညာရှိ သူတော်ကောင်းကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း
ကောင်းသော ကိုယ်ကျင့်တရား ပြောဆိုခြင်း
အပြစ်ကင်းသော အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခြင်း
အပြစ်ကင်းသော ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပြုလုပ်ခြင်း
မကောင်းမှုကို မပြုလုပ် မပြောဆိုခြင်း
၁၅။ အို-နတ်သား ငါဘုရားဟောတော်မူခဲ့သော ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့ သူတောင်စင်များဟာ နေရာတိုင်းမှာပင် အောင်မြင်မှုရလဒ်ကို ရရှိကြပါလိမ့်မယ်။ ကြီးပွားချမ်းသာကြပါလိမ့်မယ်။ ယခုငါဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ ၃၈ ဖြာတရားတော်များဟာ ကြီးပွားချမ်းသာချင်တဲ့ သတ္တ၀ါများအတွက် ကောင်းမြတ်တဲ့ မင်္ဂလာတရား အစစ်အမှန်များပင်ဖြစ်ပါတယ်။
I have heard that at one time the Blessed One was staying in Savatthi at Jeta’s Grove, Anathapindika’s monastery. Thenacertain deva, in the far extreme of the night, her extreme radiance lighting up the entirety of Jeta’s Grove, approached the Blessed One. On approaching, having bowed down to the Blessed One, she stood to one side. As she stood to one side, she addressed him withaverse.
1) Not consorting with fools, လူမိုက်များကို မမှီဝဲ မဆည်းကပ်ခြင်း
2) consorting with the wise, ပညာရှိ သူတော်ကောင်းကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း
3) paying homage to those worthy of homage: ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ခြင်း
4) Living inacivilized land, သင့်တော်သောအရပ်၌ နေထိုင်ခြင်း
5) having made merit in the past, ရှေးကောင်းမှုရှိခြင်း
6) directing oneself rightly: မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ေ၇ှာက်ခြင်း
7) Broad knowledge, အကြားအမြင် ဗဟုသုတများခြင်း၊
skill, သိပ္ပအတတ်ကို တတ်ကျွမ်းခြင်း
9) well-mastered discipline, ကောင်းသော ကိုယ်ကျင့်တရား၌တည်ခြင်း
10) well-spoken words: ကောင်းသောစကားကို ပြောဆိုခြင်း
11) Support for one’s parents, မိဘနှစ်ပါးကို ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်း
12) assistance to one’s wife and children, သားမယားများကို ပြုစုထောက်ပံ့ခြင်း
13) consistency in one’s work: အပြစ်ကင်းသော အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခြင်း
14) Giving, living in rectitude, လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်း
15) မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်ခြင်း
16) assistance to one’s relatives, ဆွေမျိုးများကို ကြည့်ရှူစောင့်ရှောက်ခြင်း
17) deeds that are blameless: အပြစ်ကင်းသော ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပြုလုပ်ခြင်း
18) Avoiding, abstaining from evil; မကောင်းမှုကို မကြံစည်ခြင်း
19) မကောင်းမှုကို မပြုလုပ် မပြောဆိုခြင်း
20) refraining from intoxicants, သေရည်သေရက် မသောက်ခြင်း
21) being heedful of the qualities of the mind: မမေ့မလျော့သော သတိတရားရှိခြင်း
22) Respect, ရိုသေထိုက်သူများကို ရိုသေလေးစားခြင်
23) humility, မာန်မာန မရှိခြင်း
24) contentment, ရသမျှနှင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း
25) gratitude, သူတစ်ပါးကျေးဇူးကို သိတတ်ခြင်း
26) hearing the Dhamma on timely occasions: အခွင့်ရတိုင်း တရားနာခြင်း
27) Patience, အရာရာမှာ သည်းခံခြင်း
28) compliance, ဆုံးမစကားကို နားထောင်ခြင်း
29) seeing contemplatives, သူတော်ကောင်းတို့အားဖူးမြော်ခြင်း
30) discussing the Dhamma on timely occasions: အခွင့်ရတိုင်း တရားဆွေးနွေးခြင်း
31) Austerity, ခြိုးခြံစွာ ကျင့်ခြင်း
32) celibacy, မေထုန်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
33) seeing the Noble Truths, အရိယာသစ္စာ တရားကို
34) realizing Unbinding: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်း
35) A mind that, when touched by the ways of the world,
is unshaken, 36) sorrowless, 37) dustless, 38) secure: လောကဓံတရား ရှစ်ပါးတို့နှင့် တွေ့ကြုံရသော အရှင်သူမြတ်၏
စိတ်သည် မတုန်မလှုပ်၊ မစိုးမရိမ်၊ ရမ္မက်ကင်း၏၊ ဘေးကင်း၏။
ဤကဲ့သို့သော (၃၈)ပါး မင်္ဂလာတရားကို လက်တွေ့
လိုက်နာကျင့်ကြံ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့် မည်သည့်နေရာ၌နေနေ မိမိအား ရန်သူတို့က မအောင်နိုင်၊ ကိစ္စခပ်သိမ်း၌ ပြီးငြိမ်းချမ်းသာခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။ ထို (၃၈)ပါးသော
တရားသည်သာလျှင် လူတကာ၊ နတ်တကာတို့အတွက် မြတ်သောမင်္ဂလာ ဖြစ်ကြောင်း သင် မှတ်သားလေလော့။
အပါး ၃၀ လောက် ကိုယ့်မှာ ပြည့်စုံနေသလားပဲ။
မင်္ဂလာကို.. Protection လို့ ဘာသာပြန်ထားတာပဲ..။
အင်း ​မောင်​ ၂ ​ယောက်​ ၃ ​ယောက်​ ​လောက်​ ​စောင့်​ ​ရှောက်​ လိုက်​ ရင်​ ​တောင်​ဘယ်​ သူ မှ မ ကပ်​ ရဲ ​တော့ ဘူး ​နော်​။
၃၈ ဖြာ မင်္ဂလာတရားဟာ တကယ် လိုက်နာသင့် လိုက်နာထိုက်တဲ့အချက်တွေပဲ။
မွေးလာချိန်မှစပြီး အမြဲ မင်္ဂလာရှိအောင်နေရင် မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ညီပါတယ်တဲ့….
မင်္ဂလ သုတ်​ ဆို တာ တ ကယ့်​ အ ​ခြေ ခံ အ သိ တ ရား ​တွေ ကို ရိုး ရိုး ​လေး ချ ပြ သွား တဲ့ တ ရား စာ ​လေး ​ပေါ့။
မင်္ဂလသုတ်ကို… ပါဠိလိုတွေ စွတ်ရွတ်မနေပဲ.. အဓိပ္ပါယ်ပဲအရကောက်.. လိုက်နာတဲ့ တရားနာသူ ဘယ်နှဦးများရှိသလဲ.. သိချင်သား..။
ဗုဒ္ဓတရားများကိုအဓိပ္ပါယ်တွေကိုပါလေ့လာကြည့်ရင်.. ဗုဒ္ဓတည်ထောင်ခဲ့တာ.. ဘာသာရေးမဟုတ်ဖူးလို့..။
ကျုပ်နားလည်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ.. ဖန်ဆင်းရှင်မရှိ၊ ရှိခိုးကိုးကွယ်ပူဇော်ရာမရှိ၊ ဆုတောင်း၍မရ/မပါ..။